Fiteny ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô - Wikipedia
Fiteny ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô
(tonga teto avy amin'ny Fiteny ao amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô)
Ny teny frantsay no teny ôfisialin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin' ny ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Ny ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô no firenena miteny frantsay misy mponina betsaka indrindra maneran-tany, ary tamin'ny taona 2016 dia Kôngôley miisa 37 000 000 any ho any (47 %n' ny mponina) no mahay mamaky teny sy manoratra amin' ny teny frantsay.
Misy fiteny tompon-tany (fitenim-poko) miisa 220 ny ao amin’ io firenena ka ny ankamaroan’ ireo dia fiteny banto, nefa ny efatra no natao fitenim-pirenena ifaneraseran’ ny mponina, dia ny fiteny soahily, ny fiteny lingala, ny fiteny kikôngô ary ny fiteny tsiloba.
Ny fiteny anglisy kosa dia ampianarina eny amin' ny anjerimanontolo mba hahafaha-misokatra amin' ny tontolo sy hahafaha-manaraka ny fandrosoana sy ny fikarohana.
Ny 77 %n' ny mponina mihoatra ny 15 taona dia mahay mamaky teny sy manoratra araka ny antontan'isan' ny UNESCO, ka ny 89 %n' ny lehilahy sy 66 %n' ny vehivavy izany.
Kolontsaina ao amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_ao_amin%27_ny_Repoblika_Demôkratikan%27_i_Kôngô&oldid=1040200"
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2021 amin'ny 13:12 ity pejy ity.